गर्मीमा खुट्टा गन्हाउँछ ? यी ९ उपाय अपनाउनुहोस् - Himalaya Post
गर्मीमा खुट्टा गन्हाउँछ ? यी ९ उपाय अपनाउनुहोस्
Posted by Himalaya Post | ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १६:०१ |
एजेन्सी – सम्झिनुहोस्, तपाई दिनभरी जुत्ता ,मोजा लगाएर काम गर्नुहुन्छ । बेलुकीतिर कसैलाई भेट्न वा केही विशेष ठाउँमा जानुहुन्छ । त्यहाँ जुत्ता खोल्दा कोही बेहोस् हुने अवस्था पनि आउनसक्छ । पुख्नुस्, यो अलि बढी नै भयो होला । तर, भनाईको मतलब तपाईका खुट्टाबाट आउने गन्धबाट कोही व्यक्तिहरु हैरान हुन्छन् । त्यसले तपाईलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस गराउँछ ।
तपाईजस्तै गर्मी मौसममा धेरै व्यक्तिहरु हैरान भएका हुन्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि पसिनाका कारणले खुट्टा गन्हाउँछ । तर, त्यसो होइन । डाक्टरका अनुसार खुट्टा ब्याक्टेरियाको कारणले गन्हाउँछ । सीमित व्यक्तिहरुले मात्रै यो बुझेका छन् कि पसिनाको कुनै गन्ध हुँदैन । तर, दिनभर खुट्टा बन्द अवस्थामा राख्नाले पसिनाले ब्याक्टेरियालाई भने अवश्य आकर्षित गर्ने गर्छ ।
कसरी खुट्टा गन्हाउनबाट रोक्ने त ? कसैले भन्ला, तुरुन्त धुनुहोस् । तर, तपाई घरिघरि खुट्टा त धुन सक्नुहुन्न नि होइन ? त्यसकारण यी ९ उपाय अपनाउनुहोस्, जसले तपाईका खुट्टा-मोजा गन्हाउनबाट जागाउनेछ ।
बेकिङ सोडा खुट्टाको दुर्गन्ध रोक्ने सबैभन्दा सरल र सस्तो उपाय हो । मनतातो पानीमा दुई चम्ची बेकिङ सोडा र कागतीको रस राख्नुहोस् । त्यसपछि त्यसमा १० मिनेटसम्म खुट्टा डुबाएर राख्नुहोस् । त्यसपछि खुट्टामा सफा मोजा लगाउनुहोस् । यो हप्तामा कम्तिमा एकपटक गर्नुहोस्
जुत्ता लगाउनुभन्दा अघि टालकम पाउडर खुट्टामा छर्किनुहोस् । पाउडरले पसिनाको गिलोपनलाई सोस्ने काम गर्छ जसले गर्दा पसिना कम निस्किन्छ । जुत्तामा पनि पाउडर छर्केर लगाउन सकिन्छ ।
मोजा छनोट गर्दा पूर्ण रूपमा कपडाको छनोट गर्नुपर्छ । नाइलन अथवा पोलिष्टर मिसिएको कपडा भएमा तपाइँ खुट्टा पोल्ने र गन्हाउने गर्छ ।
डिटोल साबुनको प्रयोग
Previous५४ किलो गाजासहित दुई पक्राउ
Nextमोदीले इमरानसंग किन हात समेत मिलाउन चाहेनन् ?
चिनमा एउटा यस्तो स्कूल जहाँ डेटिङ जान सिकाइन्छ
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:३९
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०७:३३
भारतको ७० औं गणतन्त्र दिवस : समृद्धिमा नेपाल–भारत सहकार्यको सात दशक
१२ माघ २०७५, शनिबार ०९:३०